Ny sidina Lufthansa, Suisse, Austrian, Brussels Airlines mankany Etazonia taorian'ny famerana
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny sidina Lufthansa, Suisse, Austrian, Brussels Airlines mankany Etazonia taorian'ny famerana
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Austria • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • LGBTQ • Vaovao • Safety • Vaovao Mafana Soisa • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Fanavaozana an'i Lufthansa momba ny coronavirus
Mbola manidina hatrany Etazonia ve ny Lufthansa, Suisse, Austrian Airlines ary Brussels Airlines?
Ny filoha amerikanaTrump omaly dia nandrara ny Vondron Eropeana sy Suisse tsy handeha hitsangatsangana any Etazonia hatramin'ny zoma mamatonalina. Ny torolàlana momba ny dia vaovao nodidian'ny governemanta amerikana dia nandrara ny mpandeha avy amin'ny Vondrona eropeana, Suisse ary firenena hafa hiditra ao Etazonia. Ny olom-pirenena amerikana sy ny manana karatra maintso dia mbola avela hanafoana ny fifindra-monina ao Etazonia.
Lufthansa Group Airlines, ampahany amin'ny Star Alliance izay vao notantaraina eTurboNews hanohy hanolotra sidina mankany Etazonia avy any Alemana, Aostralia, Suisse ary Belzika izy io. Ny sidina sasany dia hiara-miasa sy codeshare miaraka amin'ny United Airlines, izay mpikambana ao amin'ny Star Alliance ihany koa.
Ny vondrona Lufthansa dia hanohy hiasa sidina avy any Frankfurt mankany Chicago sy Newark (New York), avy any Zurich mankany Chicago sy Newark (New York), avy any Viena mankany Chicago, ary avy any Bruxelles mankany Washington mihoatra ny 14 martsa, ka mitazona fifamoivoizana an'habakabaka farafaharatsiny. fifandraisana amin'i Etazonia avy any Eropa.
Ny zotram-piaramanidina dia miasa amin'ny fandaharam-potoana sidina hafa ho an'ny Etazonia.
Ireo mpandeha dia mbola afaka hahatratra ny toerana rehetra aleha any Etazonia amin'ny alàlan'ny hub US sy ny sidina mampifandray izay natolotry ny kaompaniam-pitaterana United Airlines.
Ho fanampin'izay, ny sidina amerikana hafa rehetra dia haato mandra-pahamarika noho ny fameperana fitantanan'i Etazonia, ao anatin'izany ny fiainganana rehetra avy any Munich, Düsseldorf ary Geneva.
Ny Vondrona Lufthansa dia hanohy hanompo amin'ny toerana rehetra aleha any Canada mandra-pahatongan'ny fampandrenesana fanampiny.
Araka ny nomanina, ny seranam-piaramanidina Lufthansa Group dia manolotra fifandraisana 313 mankany amin'ny toby 21 any Etazonia avy any Eropa amin'ny fandaharam-potoanan'ny ririnina, izay mbola manan-kery hatramin'ny 28 martsa.
Ny fiantraikan'ny programa sidina Lufthansa Group noho ny fidirana vao novaina farany fitsipika ho an'i India is manombanana izao.